မန္တလေး မဟာမုနိ မှ ဟိန္ဒူ နတ်ဒေဝါကြေးရုပ်ကြီးများ - Khit THit Media
မန္တလေး မဟာမုနိ မှ ဟိန္ဒူ နတ်ဒေဝါကြေးရုပ်ကြီးများ
မန္တလေး မဟာမုနိ မှ ဟိန္ဒူ နတ်ဒေဝါ ကြေးရုပ်ကြီးများ
ကြေးရုပ်များကို ကိုင်တွယ်ခွင့်မပြုပါ တဲ့… သိပ်လှတဲ့ စာတမ်းလေးဗျာ… ဒီစာတမ်းလေးပေါ်လာဖို့ ၂၀၀၃ လောက် က စ တွေ့ရာလူ လိုက်ပြော နေခဲ့တာ ၂၀၁၇ မှာ တော့ တကယ်ဖြစ်လာတယ်.. ဝမ်းသာလိုက်တာ…၁၄ နှစ်ကြာတယ်…
မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော် ဆိုတဲ့ မန္တလေးဘုရားကြီး ထဲက ကြေးရုပ်ကြီးတွေ ကို လက်နဲ့ပွတ် ရင် ပွတ်တဲ့နေရာက ရောဂါဘယ ပျောက်ကင်းတယ် ထင်လို့ ပွတ် ပွတ်ပြီးဆုတောင်းကြတယ်… ဟိုး ဧည့်လမ်းညွှန်သက် နုစဉ်အခါက ဧည့်သည်တွေ ကြေးရုပ်ကြီးတွေ လိုက်ပြတဲ့အခါ ကြေးရုပ်ကြီးတွေဟာ အန်ကာဝပ်ကနေ ယိုးဒယား၊ ယိုးဒယားကနေ ဟံသာဝတီ၊ ဟံသာဝတီကနေ ရခိုင် … ရခိုင်ကနေ မန္တလေး ယူလာတာဖြစ်ကြောင်း နဲ့ သမိုင်းအကျဉ်းရှင်း…. ပြီးရင် ပ္ပွတ်သပ်ဆုတောင်းသူတွေကိုပြပြီး ဒါဟာ အဓိပ္ပါယ် မဲ့ တဲ့ မိရိုးဖလာ လို့ ပြစ်တင်ပြောဆိုရှင်းလင်းခဲ့ဖူးတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ က နံမည်ကြီး ပြတိုက်တခုဖြစ်တဲ့ metropolitan Museum ကလာတဲ့ အဖွဲ့ တဖွဲ့ ကိုဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ရတယ် .. မန္တလေးရောက်တော့ Museum curator က မဟာမုနိကိုယ်တော်ကြီးထက် ဒီကြေးရုပ်တွေကြည့်ချင်နေတဲ့လူ….ရောက်ရောက်ချင်း ကြေးရုပ်ကြီးတွေဆီခေါ်သွားရတယ်… ဟိုရောက်တော့ … ဟာ မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်နေကြတာလဲ လို့အလန့်တကြား ထ အော်တယ်… ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးတော့ ဒီလူတွေဘာလို့ ဒီအရုပ်တွေ ပွတ်နေကြတာလဲ တဲ့ … ကျွန်တော် က ရှင်းပြနေကျအတိုင်း ကျမ်းမာရေးအတွက် လုပ်ကြတာ လို့ရှင်းပြတော့ နဖူးရိုက်ပြီး ဟာကွာ … ဒီအရုပ်တရုပ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးသိလား တဲ့… ဒီအရုပ်တွေဟာ ကမ္ဘာဒီးယား ကြေးရုပ်ထုခြင်းအတတ်ပညာ ကို လေ့လာဖို့၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို လေ့လာဖို့၊ ကမ္ဘာမှာ ရှားရှားပါးပါးကျန်နေဆဲ သမိုင်းအထောက်အထား တွေဖြစ်လို့ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာအဖိုးတန်ပါတယ် တဲ့… ကျွန်တော် ဒီအရုပ်တွေရဲ့ တန်ဖိုး အဲ့လောက်ကြီးမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး…
၁၉၇၅-၁၉၇၆ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ ကို ပိုပေါ့ ဦးဆောင်တဲ့ ကွန်မြူနစ် ခမာနီ တွေ အုပ်ချုပ်တုန်းက နိုင်ငံကို အသစ်ပြန်မွေးဖွားမယ် ဆိုပြီး ပညာတတ်တွေကိုသတ်တယ်… ရှိသမျှ ဘာသာရေးပစ္စည်းတွေ အရည်ကြိုပစ်တယ်… သစ်သားအရုပ်တွေမီးဆိုက်ခဲ့တယ်.. အန်ကာဝပ်အပါအဝင် အန်ကော ယဉ်ကျေးမှု တခုလုံး က ကြေးရုပ်တွေ ကျောက်ရုပ်တွေ ကျောက်စာ တွေ အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာ အကုန်နီးပါးပျက်စီးသွားတယ်… သမိုင်း မှာ ဘာမှ မကျန်ခဲ့ဘူး.. ကျောက်ရုပ်နည်းနည်း ကြေးရုပ်အသေးနည်းနည်း ပဲ ကျန်ခဲ့တယ်..မင်းတို့ပုဂံခေတ် လိုပဲ အရှေ့တောင်အာရှသမိုင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ အန်ကောသမိုင်းတခုလုံးက အဖိုးတန်သမိုင်းဝင် ရုပ်ထုတွေ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်… အဲ့ဒီ ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲမှာ ကံ ကောင်းတာက ဟောဒီ ကြေးရုပ်တွေ ဟာ ကမ္ဘာဒီးယားမှာ မရှိပဲ မြန်မာပြည်ရောက်နေခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာဒီးယားပျက်စီးချိန်က လွတ်ခဲ့တယ်။ ဒီကြေးရုပ်ကြီးတွေကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိနေခဲ့ရင်လည်း အမြှောက်ကျည်ဆံဖြစ်မလား ပဲ….တဲ့
ကျွန်တော် သမိုင်းကွင်းဆက်တွေကို ပြန်ဆက်စပ်ကြည့်ကြတယ်… 1431 မှာ ထိုင်းက ကမ္ဘာဒီးယား ကို ဝင်တိုက်ပြီး အနိုင်ရတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ဘာယူရမလဲ လို့ကြည့်တော့ ခမာလူမျိုးတွေ အမြတ်တနိုး ကိုးကွယ်တဲ့ ဒီဟိန္ဒူနတ်ဘုရား ရုပ်ထု ပေါင်း ၃၀ ကို အယုဒ္ဓယ ကို ယူသွားခဲ့တယ်… ၁၃၈ နှစ်တိတိ ထိုင်းမှာ ဒီ အရုပ်ကြီးတွေ နေခဲ့ပြီး ၁၅၆၄ ခုနှစ်မှာ ဘုရင့်နောင် က အယုဒ္ဓယ ကိုဝင်တိုက်ပြီး ဒီကြေးရုပ်တွေကို ထိုင်းအပေါ် စစ်အောင်မြင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ဟံသာဝတီကို ယူသွားခဲ့တယ်..
၁၅၉၉ ဘုရင့်နောင် နတ်ရွာစံပြီး နန္ဒဘုရင်လက်ထက် ဟံသာဝတီအင်ပါယာ ပြိုကွဲစ ပြုချိန်…..ယိုးဒယားဘုရင် နရစူဝမ် က ဟံသာဝတီ ကို ဝင်တိုက်ဖို့လုပ်တော့ တောင်ငူဘုရင် မင်းရဲသီဟသူ နဲ့ ရခိုင်ဘုရင် မင်းရာဇကြီး တို့က ယိုးဒယားဘက်က ဝင်ကူပါ့မယ် လို့ကတိပေးခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့ နရစူဝမ် ရဲ့ ယိုးဒယားတပ်တွေပူးပေါင်းဖို့ မလာခင် ဟံသာဝတီ ကို ရခိုင် နဲ့ တောင်ငူ့ နှစ်ဦးပေါင်းလုပ်ကြံ ပြီး ဘုရင့်နောင်ရှာထားသမျှ ခွဲယူရင် ယိုးဒယားကို ခွဲပေးစရာ မလိုဘူး .. ပိုရမယ် ထင်ပုံရပါရဲ့… အယုဒ္ဓယ ဘုရင် ကို မစောင့်ပဲ ရခိုင်နဲ့ တောင်ငူ နှစ်ပြည်ထောင်ပေါင်းတိုက်ကြတယ်.. ဟံသာဝတီ ကျပြီး ရွှေ ငွေ ရတနာတွေကို အညီအမျှ ခွဲယူတဲ့ အထဲ ခမာတွေရဲ့ နတ်ဘုရားအရုပ် ၃၀ ကို ရခိုင် ယူသွားလို့ ဒီကြေးရုပ်တွေ ရခိုင်ရောက်ကုန်ရော…အညီအမျှခွဲတယ် ဆိုတော့ တပြည်ထောင် ၁၅ ရုပ်စီ ခွဲသလား? တောင်ငူမှာလည်း ကြေးရုပ်ကျန်မလားမပြောတတ်ဘူး…ကြေးရုပ်ကြီးတွေဟာ ဟံသာဝတီ နန်းတွင်းထဲ ၃၅ နှစ်တိုင် နေခဲ့တယ်..
ကြေးရုပ်ကြီးတွေဟာ ရခိုင်နန်းတွင်းထဲမှာ ၁၈၅ နှစ်နေခဲ့ပြီး ၁၇၈၄ ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက် မှာ သတိုးမင်းစော ခေါ်အိမ်ရှေ့စံကိုယ်တော်ကြီး ရခိုင် ကို လုပ်ကြံပြီး ဒီ ကြေးရုပ်တွေကို စစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့ မန္တလေး ကို ယူလာခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်… ရခိုင်နန်းတော် ကိုမီးတိုက်တော့ နတ်ရုပ်တော်တော်များများပါသွားပြီးလက်ကျန် ၆ ရုပ်ပဲ မန္တလေးပါလာတယ် ဆိုပါတယ်… ၁၈၈၄ သီပေါမင်းလက်ထက် မဟာမုနိဘုရားကြီး မီးဘေးသင့်တော့ ဘယ်နှရုပ်ပါသွားသေးလဲမသိဘူး…
ကြေးရုပ်ကြီးတွေဟာ ကမ္ဘောဒီးယားကနေ စ ပြီး အရှေ့တောင်အာရှတခုလုံး ပတ် သယ်ယူနေတဲ့ အချိန်မှာ တောထဲတောင်ထဲ သယ်ယူရခက်လို့ ဖြတ်တောက်ယူခဲ့ရတယ် လို့ထင်မြင်ယူဆကြောင်း ကြေးရုပ်ကြီးတွေပေါ်က ဒါဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ကြည့်ပြီး ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်.. ဧရာဝဏ် လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဒရာ Indra (ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ သိကြားမင်း) နတ်မင်းကြီးရဲ့ စီးတော်ယာဉ် ခေါင်းသုံးလုံးဆင်ကြီးသာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပြီး ကျန်တဲ့ နတ်ရုပ်တွေက ပစ်ထားတဲ့ အခြေအနေဆိုးဆိုး ဖြစ်နေတယ်.. နတ်ကြေးရုပ် ရုပ်အကြီးဟာ ဗြိဿနိုး ( Vishnu) လား? Indra အင်းရာ နတ်မင်းလား မခွဲတတ်ပါဘူး..ကြေးနတ်ရုပ်ကြီးတွေရဲ့ မျက်လုံးတော်နေရာဟာ ဟောင်းလောင်းအပေါက် ဖြစ်နေပြီး ညတွေမှာ အရုပ်နောက် က ဆီမီးပူဇော်ထားရင် မျက်လုံးတွေထဲက အလင်းရောင်ထွက်ဖို့လုပ်ထားတာလား? ကျောက်မျက်ရတနာ တပ်ထားခဲ့တာလား မသိဘူး… ဒီ ကြေးရုပ်တွေထဲမှာ နရသီဟ (Narasinga) ခေါ်တဲ့ ဗစ်သျနူး (ဗြိဿနိုး) နတ်မင်းကြီးရဲ့ ကိုယ်ပွား ခြင်္သေ့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်… ခြသေ့င်္တွေဟာ ဦးခေါင်းမရှိတော့လို့ မြန်မာ ကြေးသွန်းပညာရှင်တွေက ဗမာခြသေ့င်္ခေါင်း တပ်ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
သမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါ ရုပ်ပွားဆင်းတုတွေ အရုပ်တွေဟာ ဘယ်ဒေသ ဘယ်ခေတ် ဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေရှိပါတယ်… ဥပမာ ပုဂံ ခေတ် ဘုရား ဟုတ်မဟုတ် နှုတ်ခမ်းတော် ကိုကြည့်ရင် နှုတ်ခမ်းတော်ဟာ ဘေးအစွန်းနှစ်ဖက်မြင့်တက်နေပြီး အောက်နှုတ်ခမ်း ကြီး ပြီး အင်္ဂလိပ် လက္ခဏာ V ပုံပေါ်ပါတယ်.. ဒါဆို ပုဂံခေတ်လက်ရာလို့ ပြောလို့ရတယ်… အခု နတ်ရုပ်ကြီးတွေ ပြုံးရီတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ထုရာမှာ နှုတ်ခမ်းဟာ straight lips တည့်တည့် ဘေးကို ကားသွားပါတယ် .. Khmer smile လို့ နံမည်ကျော်တယ်.. ဒါကိုကြည့်ရင် ဒီ နတ်ရုပ်ကြီးတွေ ကမ္ဘောဒီးယား ဘုရားကျောင်း တကျောင်းကျောင်းကလာတာ သေချာပြီ… နှစ် ၉၀၀ ကျော်ပြီ… တချို့ အန်ကောဘုရားကျောင်းတွေရဲ့ အလယ်က ဂန္ဓကုဋီ တိုက်ထဲမှာ အခု နေရာတွေလွတ်နေတယ်…ဒီနတ်ရုပ်ကြီးတွေ အယင်က သီတင်းသုံးခဲ့ပုံရတယ်… ကမ္ဘာဒီးယားမှာ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကြေးရုပ်ဘာမှ မရှိတော့…သမိုင်းကွင်းဆက် က ဒီ ခြောက်ရုပ်မှာပဲ ကျန်တော့တယ်…
အရှေ့တောင်အာရှ သမိုင်း ရဲ့ အခမ်းနားဆုံး ဘုရားကျောင်းတော်ကြီး တွေထဲ မှာ ကိုးကွယ်ဖို့ထုထားတဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာဟိန္ဒူ ကြေးနတ်ရုပ်ကြီးတွေဟာ ၁၇၈၄ နှောင်းကစပြီး ဒီနေ့အထိ နှစ် ၂၃၃ နှစ် တိုင်တိုင် ရာထူးလျောကျလို့ အိမ်နိမ့်စံဘဝ နဲ့ မဟာမုနိဒေါင့်တနေရာမှာ အုတ်တိုက်သေးသေးတခုထဲ ရောဂါသည် ဟိုလူပွတ် ဒီလူပွတ် နဲ့ မတင့်မတယ် စံနေရပါလား… တချိန်က စစ်အောင်ခြင်းရဲ့ နမိတ်ပုံ… နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး သမိုင်းရဲ့ အထည်ဝါဆုံး ရုပ်ထုတွေ ရဲ့ ဘဝ ဆိုးလှပါလား… တန်ကြေးတွက်ကြည့်ရင် ဒီတရုပ် တရုပ်တန်ဖိုး ဒေါ်လာ သန်း ၅၀-၁၀၀ များရှိမလား? ဒီကြေးရုပ်ကြီးတွေဟာ သွန်းလောင်းတာ တချို့က bronze casting မဟုတ်ပဲ bronze carving ထုလုပ်တာ လို့ တောင်ပြောကြတယ် .. ကြေးရုပ်ကြီးတွေရဲ့ ခန္တာကိုယ် တနေရာနဲ့ တနေရာ အရောင်မတူပါဘူး… ကြေးနီကဲတဲ့နေရာ.. အဝါဖေါက်တဲ့နေရာ… အဖြူများတဲ့နေရာ စုံနေလို့ သတ္ထုတွေ အရည်ကြိုလောင်းထားရင် တရောင်ထဲညီနေမှာ.. ဒါ အရည်ကြိုလောင်းထား တာမဟုတ်နိုင်ဘူး သတ္ထု ကို ဖဲ့ပြီး စပ်ထုထားတာလို့တောင်ပြောကြတယ်…
ဒီအရုပ်ကြီးတွေကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ပွတ်သပ်ဆုတောင်းကြလို့ အရုပ်ပေါ်က လက်ဝတ်လက်စားတွေ… နှုတ်ခမ်း မျက်လုံးတွေဟာ လူ့လက်ဖဝါးပေါ်က အက်စစ်နဲ့ ထိပြီး လက်ရာတွေပျက်ကုန်ပါတယ်…ပွတ်လေ ပြောင်လေ… ကြေးသတ္ထု ဟာ အင်မတန်နုညံ့ပါတယ်… ပွတ်ရင် ပါးပြီးပေါက်ကုန်ရော….. အခုတော့ လုံးပါး ပါးရင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့နောက်ဆုံးလက်ကျန် နတ်ရုပ်ကြီးတွေ ပေါ်က တန်ဆာအမှတ်အသားတွေ ပျောက်လာလိုက်တာ.. ပွတ်ရင်း ပွတ်ရင်း ခြသေ့င်္ရုပ်ကြီးဆို သွားတောင် မရှိတော့ဘူး…
ကျွန်တော်ဟာ အဲ့ဒီအချိန်က စပြီး ဂေါပက တွေ ပညာရှင်တွေ စာရေး ဆရာတွေ ကို ဒီလို ပွတ်တာ ကိုင်တာ ပိတ်ပင်ပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်… ဒီလောက်မှ တန်ဖိုးမဲ့ ပစ်ထားရင် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး တိုးအောင် ကမ္ဘောဒီးယား ပြန်ပေးရင်ပေး မပေးရင်လည်း အမေရိကန်က ပြတိုက်တခုရောင်းပစ်လိုက်ဗျာ… ပိုက်ဆံအများကြီးရမယ်… ရွဲကုန်သည်ထဲကလို ရွှေခွက်မှန်းမသိပဲ တန်ဖိုးမဲ့ဖြစ်နေပုံများ ရင်နာစရာကောင်းလှပါတယ်… ဟိုခေတ်က တော့ ပြောသာပြောတယ်… ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ဘူး…
၂၀၁၂ တမနက် မှာ စာရေးဆရာတချို့ နဲ့ လွှတ်တော်အမတ် တချို့ကို Curator က Strand Hotel မှာ မနက်စာကျွေးပြီး ဒီကြေးရုပ်တွေ လူတွေမကိုင်တွယ်သင့်ကြောင်း နဲ့ ကြေးရုပ်တန်ဖိုးကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြတယ်… နောင် ယဉ်ကျေးမှု ဒု ဝန်ကြီး ဖြစ်လာတဲ့ စာရေးဆရာ USDP လွှတ်တော်အမတ်ကို အဓိက ရှင်းပြတာပါ.. လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်သွင်းပြီး ကန့်ကွက်ပေးစေချင်လို့ ဖိတ်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်…စာရေးဆရာ တချို့လည်း ဆောင်းပါးရေးကြတယ်… နောင် သူဒုဝန်ကြီး ဖြစ်လာတော့ ဝမ်းသာအားရ ငါ့ ကြေးရုပ်တွေ တော့ သက်သာပြီ လို့ မှတ်တယ်… ၂၀၁၅ သူ ဒုဝန်ကြီးရာထူးက ဆင်းသွားသည်အထိ ပွတ်တဲ့လူ က ပွတ်ဆဲ… ဘာမှ မထူး…
ကျွန်တော်နဲ့ Curator က တော့ မန္တလေး မဟာမုနိသွားတိုင်း လာပြီး ပွတ်မဲ့လူတွေကို ကြေးရုပ်ကြီးတွေရှေ့ မတ်တပ်ရပ် လက်ကာပြီး တားတယ်.. လူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို အရူးလိုကြည့်ကြတယ်… ကြည့် ကြည့်ဗျာ…ကိုယ် ဒီအထဲ နာရီဝက်ရှိနေတုန်း အပျက်အစီးနဲနဲမှ သက်သာ သက်သာပေါ့…. တွေ့ရာလူ ကို ဒီအရုပ်တွေရဲ့ တန်ဖိုး မမောနိုင် ပြောမိတယ်…
ကဲ အခုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေး မပွတ်တော့ဘူးတဲ့… ဝမ်းသာတာဗျာ… သမိုင်းတန်ဖိုးအင်မတန်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေ… ခေတ်အဆက်ဆက်က ဘုရင့်နောင် ကိုယ်တော်ကြီး အပါအဝင် ဘုရင်တွေ အလေးခံပြီးသယ်လာတာ ပေါ့သေးသေးမမှတ်ကြနဲ့ဗျာ…ဒီအရုပ်ကြီးတွေ ရဖို့ အတွက် စစ်ဖြစ်လားတောင်မသိဘူး…. စောင့်ရှောက်ကြပါ… ထိမ်းသိမ်းကြပါ… ဒီထက် တင့်တင့်တယ်တယ်ထားပေးကြပါ… ကျွန်တော်ရေးတာထက် ပို အသေးစိတ်တဲ့ သမိုင်းကို ပညာရှင်များတူးဖေါ်ပေးကြပါ…
အခုလို စောင့်ရှောက်တဲ့ အစိုးရ နဲ့ ဂေါပကကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
photWinko Kyaw Kyawnko Kyaw : internet
Facebook​ ​ပေါ်feel post တင်ချင်လို့ ရည်းစားကိုဖြတ်တဲ့​ကောင်မ​လေး
Previous Article အရှက်တရားမှာ တားဆေးမရှိဘူး
Next Article Facebook​ ​ပေါ်feel post တင်ချင်လို့ ရည်းစားကိုဖြတ်တဲ့​ကောင်မ​လေး